गुगल एडसेन्स अब मेरो फिड मुद्रीकरण गर्दै Martech Zone
गुगल एडसेन्स अब मेरो फिड मुद्रीकरण गर्दै
सोमबार, अगस्ट 25, 2008 सोमबार, जनवरी 7, 2013 Douglas Karr
केहि समयको लागि मैले मेरो फिडमा एफिलियट मार्केटि ads विज्ञापनहरू चलाएँ पोष्ट पोष्ट प्लगइन मैले WordPress र को लागी विकसित गरेको छु आयोग जंक्शन विज्ञापन। यो वास्तवमै कुनै महत्वपूर्ण राजस्वको स्रोत थिएन, यद्यपि, सायद केहि महिनामा।
यस हप्ता, मैले गुगल एडसेन्सको साथ मेरो फिड फर्नरबाट गुगलमा रूपान्तरण गरे। यो गर्नको लागि प्रक्रिया अझै मैनुअल हो, तर नडराउनुहोस्, तपाईंले यस प्रक्रियामा एकल ग्राहक गुमाउनु हुने छैन। दुबै ठेगानाहरूले फिड प्रकाशित गर्न जारी राख्छन्, तर गुगलमा फिड राख्दै मौद्रिक फाइदाहरू छ किनकि यसले तपाईलाई फिडका लागि गुगल एडसेन्समा पहुँच प्रदान गर्दछ।
केवल तपाईंको एड्सेन्स खातामा लगईन गर्नुहोस् र रूपरेखाका लागि तपाईंको फिड म्यानुअल रूपमा सबमिट गर्न निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। मेरो रूपान्तरण हुन लगभग एक हप्ता लाग्यो। गुगल प्रोमिस गर्दैछ कि भविष्यमा यो एक स्वचालित प्रक्रिया हुनेछ।
यो अझै सिद्ध छैन, यद्यपि! माथीको विज्ञापनलाई एक कट्टरपन्थी राजनीतिक संगठनबाट हेर्नुहोस्, जसले जो बिडेनको बारेमा मेरो टिप्पणीसँग जोडी बनाए। सन्दर्भित लेख वास्तवमा बिडेनको brother० बर्षको ईतिहासको ठूलो भाईसँग भोट हाल्ने र साना केटालाई झुण्ड्याउन छोडेकोमा एक अत्यन्तै डरलाग्दो दृश्य थियो।
म फिडमा Adsense बाट धेरै राजस्वको अपेक्षा गर्दिन। धेरै व्यक्तिहरू केवल प्रोग्राम कल गर्दैछन् वेबमास्टर कल्याण.
टैग: फिडGoogle AdSenseमुद्रीकरण
ग्रीन जानुहोस्: s तरीकाहरू सीडीहरू र डीभीडीहरू प्रयोग गर्न रोक्न
WordPress र MySQL: तपाईको शब्द गणना के हो?
अगस्ट 25, 2008 बेलुका 10:18 बजे
वास्तवमा डगलस मसँग लगभग एक हप्ताको लागि RSS विज्ञापनहरू थिए र केही दिनहरूमा मैले ब्लग एडसेन्स ब्लकहरूबाट गरेको भन्दा त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी गरेको छु। निश्चित छैन कि यो समय संग टिक्छ तर यो निश्चित छ कि अहिले को लागी noce छ।
अगस्ट 26, 2008 मा 7: 35 AM
त्यो सुन्दा राम्रो लाग्यो! म यसलाई टेकेको हेर्नको लागि उत्सुक छु। हिजो यो $0.01 थियो, hehe.
अगस्ट 26, 2008 मा 6: 43 AM
म यसलाई वेबमास्टर वेलफेयर भन्छु किनभने यो अनिवार्य रूपमा "ह्यान्डआउट" हो र यसले सभ्य सिक्का बनाउँदैन - हाम्रो रेभ यसबाट एक महिना5अंक हो।